फ्रेन्च नागरिकको नेपालमा खेती | Sima Pari
Home / Featured News / फ्रेन्च नागरिकको नेपालमा खेती
फ्रेन्च नागरिकको नेपालमा खेती
विजनेस विक र मियामी हेराल्डजस्ता पत्रिकाका आर्थिक संवाददाता थिए उनी। विकासशील मुलुकहरूमा लगानीका सम्भावना विषयमा विभिन्न रिपोर्टहरू तयार पारेरै उनले एक दशक बिताए। चिज एकदमै रूचाउँथे उनी। तर, जागिरे व्यस्तताले गर्दा चिज बनाउने सिप सिक्ने पर्याप्त समय पाएनन् उनले। एकदिन त्यो व्यस्तता छाडेर निस्किए। भन्छन्, “सहरमा बस्ने, बिहान अफिस धाउने र साँझ र्फकने काम मलाई कत्ति मन परेन।”
फ्रान्स्वाले हिमालयन फ्रेन्च चिज नामक कम्पनी स्थापना गरेका छन्, काठमाडुंको टोखामा। जग्गा भाडामा लिएपछि सन् २००७ मा टोमी डी सेभई नामको हल्का कडा चिज बनाउने परम्परागत सिप सिक्न उनले फ्रान्सका पहाड घुमे।
परम्परागत फ्रान्सेली विधिबाट बनाइएको चिजको स्वाद असली हुने उनको भनाइ छ। भन्छन्, “नेपालीहरू भात मात्रै खान्छन्, फ्रान्सेलीहरू भने पाउरोटी र चिज खाएर हुर्कन्छन्।” फ्रान्स्वालाई धेरैले सोध्छन्, किन त्यस्तो धनी र सम्पन्न देश छाडेर नेपाल आएको ? किन यस्तो दुःख गर्नुपरेको ? उनीसँग तिनका लागि दिने तयारी जवाफ छ, “काम गरेर खान आएको।” उनको उत्तर सुनेर मान्छे छक्क पर्छन्। उनी हाँस्दै भन्छन्, “खासमा नेपालमा म आनन्द खोज्न आएको हुँ।”
Previous: पूर्वराजालाई भेट्न आपत्ति छैन: भारत
Next: आमिर खानले तोडे सलमान खानको रेकर्ड
May we learn from this guy.